I-NOAA's Greenhouse Index Index Iphezulu ngama-40% Kusukela ngo-1990 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amagesi abamba ukushisa abaluleke kakhulu ukuze kube nokuphila eMhlabeni; Kodwa-ke, ngenxa yokukhishwa okuqhubekayo kwamagesi afana ne-carbon dioxide noma i-methane, isimo sezulu sishintsha kakhulu kuyo yonke iplanethi. Ukuzama ukuyigcina ilawulwa, izinto eziphilayo ezahlukahlukene zigcina irekhodi lemininingwane esemkhathini esiza izazi zezulu ukwenza izibikezelo ezinembe ngokwengeziwe, ngokwesibonelo i-NOAA Greenhouse Gas Index, esuselwa emininingwaneni esemkhathini, isebenza yazi ukuthi kwenzekani ngesimo sezulu njengamanje.
Futhi okwenzekayo akukuhle: amagesi abamba ukushisa akhule ngo-40% phakathi kuka-1990 no-2016.
1 Uyini umphumela wokushisa?
2 Iyini imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke?
Uyini umphumela wokushisa?
Umphumela wokushisa ukukhuphuka kwamazinga okushisa ngenxa yokucinana kwamagesi okungumphunga wamanzi (i-H2O), i-carbon dioxide (CO2), i-methane (i-CH4), i-nitrogen oxide (i-NOx), i-ozone (i-O3) ne-chlorofluorocarbon (i-CFCs).
Lapho imisebe yelanga ifinyelela eMhlabeni ishisa umhlaba ngokushesha, ngoba umkhathi ubonakala ngokukhanya okukhanyayo kodwa kuncane kakhulu ngemisebe ye-infrared. Lapho nje sebethinte ubuso bomhlaba, bayawenza likhipha imisebe ye-infrared emuncwa kakhulu ngumkhathi.
Yize inani lamandla elikhishwa emkhathini lilingana nalokho okumuncwa, ubuso bomhlaba kufanele bufinyelele izinga lokushisa lapho kokubili ukugeleza kulingana, okuyi-15ºC ngokwesilinganiso.
Ukube lo mphumela awukhiqizwanga, besiyoba nokushisa okuphakathi komhlaba okuyi -18ºC. Kepha uma ukuminyana kwegesi ebamba ukushisa kuqhubeka nokukhuphuka, imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ingaba mibi kakhulu, ngoba izinga lokushisa elijwayelekile belizonyuka kuphela. Ngokudabukisayo, yilokho kanye okwenzekayo.
Imiphumela yokufudumala kwembulunga miningi futhi yehlukahlukene, phakathi kwabo sithola:
Amazinga okushisa afudumele
Iziphepho ezinamandla ngokwengeziwe
Amagagasi okushisa aqinile
Ukuqothulwa kwezinhlobo zezilwane nezitshalo
Iziphepho eziyingozi kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-NOAA's Greenhouse Gas Index inyuka ngama-40% kusukela ngo-1990
Iziteshi zesimo sezulu zesifundo sokushintsha kwesimo sezulu eMount Teide